धरान । पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा कविगोष्ठी सम्पन्न भएको छ । साहित्यकार कविराज पोखरेलको स्मृतिमा कविगोष्ठी र श्रद्धासुमन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । विराटनगरस्थित हिमाल दर्शन कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार कविराज पोखरेलले नेपाली गजल, कविता र खण्डकाव्यमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गरिएको थियो । कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार प्राज्ञ दधिराज सुवेदीले पोखरेलको गजल लेखनमा छुट्टै पहिचान स्थापित भएको उल्लेख गरे । उनले विराटनगरमा बसेर काठमाडौंलाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता साहित्यकार पोखरेलमा रहेको बताए । त्यस्तै अग्रज साहित्यकार बलराम पोखरेलले आफ्ना गहकिलो कृतिमार्
सौन्दर्यको नयाँ भूगोलमा उभिएका सांस्कृतिक कविताहरू
साहित्यिक विधाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लेखिने विधा भएको कारण छलफल र विमर्श पनि कविताकै बारेमा बढी हुने गरेका छन् । बढी लेखिने विधा भएपछि स्वाभाविक रूपमा कवितासङ्ग्रहहरू नै बढी प्रकाशन हुने गरेका छन् । समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विषयमा आप्mना दृष्टिकोण कलात्मक रूपमा तत्काल अभिव्यक्त गर्न पनि सबैभन्दा सहज र छरितो विधा यही नै हो । अन्य विधाका तुलनामा समकालीन संवेदना र चेतनाको अभिव्यक्ति बढी हुने गरेका कारण पनि स्रष्टाहरू कविता लेखनमा बढी आकृष्ट भएका हुन् । अन्य भाषामा जस्तै नेपाली भाषामा पनि बजारमा तुलनात्मक रूपमा कवितासङ्ग्रहहरू नै बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । यसै क्रममा सुष्मा
वडाध्यक्षको पाँच वर्षे विकास यात्राः सडक ४ माइल, साहित्यमा सहस्र माइल
‘एउटा बाटो पिच गर्नु, एउटा चौतारो बनाउनु मात्र विकास होइन । तपाईले बनाएको बाटो भोलि उप्किन सक्छ । पिच भत्कन सक्छ । तर साहित्यमा तपाईंले पाँच वर्ष गरेको योगदान स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ ।’यो कुनै महान् दार्शनिकको भनाइ होइन । तर महान् काम गर्ने एकजना सामान्य मानिसको भोगाइ हो । एउटा मन्त्रीले ‘बोल्ने भाँती’ नपुर्‍याउँदा ‘वडाध्यक्ष’ जत्तिको पनि बुद्धि नभएको भनेर आलोचना गर्छ हाम्रो समाज । त्यही समाजको परिवर्तनका खातिर चेतना र बौद्धिक विकासमा उल्लेखीय काम गर्न सफल धरान १३ का ‘वडाध्यक्ष’ नेत्र काफ्लेको भनाइ हो यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे
लघुकथा : 'अठोट'
“आत्थु कस्तो पोल्यो,यो के चिज हो ?" आफ्नो हात झम्झमाउन थालेपछि हरिले बाटोमा भेटिएको बटुवालाई सोध्यो। “सिस्नु" भन्ने जवाफ सुनेपछि उसले मनमनै सोच्यो,बुवाले प्रेसरको दबाई भन्दै बेलाबेला महगो मुल्यमा किन्ने गरेको धुलोको बोट यता पाखैभरि यस्तो बेवारिस।यसलाई संकलन गरि हाम्रो बुवाले किन्ने गरेको जस्तै धुलो बनाउन पाए ! शहरमा जन्मेको उतै हुर्के पढेको हरि केहि दिनको लागी भनेर बुवाले पहिल्यै छोडेको गाउंको थातथलो घुमफिर गर्न जांदैथियो। गाउं पुगिसकेपछि उसलाई त्यहांको हरेक कुराले लोभ्यायो।त्यतिकै खेर गइरहेको जडिबुटी,फलफूल आदि।उता शहरमा डेराको बसाई सदाको कोलाहल,यता गाउंमा स्वच्छ हावापानी शान्त बा
अलिखित इतिहासको एउटा खण्डबाटअप्राकृतिक रूपमाफुत्त निस्किएको पागल घोडाकुदिरहेछ जथाभावीसभ्यताका बारहरू भत्काउँदैघामका किरणहरूलाई कुल्चँदैपाखाभरि राताम्मे फुलेकालालीगुराँसका नीला भावनाहरूमाथिनिर्मम टापहरू बजार्दैबेलगाम कुदिरहेको पागल घोडासमयको वेगलाई पल्टाउनेहास्यास्पद प्रयासमाअघिल्ला खुट्टाहरू उफारेर वीभत्स हिन्हिनाइरहेछयति बेला जोखिममा परेको छ गुराँसको अस्तित्वशताब्दीयौँदेखिआँधी र असिनालाई झेल्दै आएका गुराँसहरूअस्तित्व रक्षाका निम्ति अन्तिमपटकज्यानको बाजी थापेरउभिएका छन् पागल घोडाविरुद्धशिशिरका अन्तिम प्रहरहरूगालामा चीसो थप्पड हिर्काएर चिप्लिरहेका छन्पागल घोडाको वेगसँगै हुर्रिएरपहेँला पातहरू उड
थालनी कोरोनाको कहरले सहर र बस्तीहरू ग्रस्त छन् । अकालैमा ज्यान गुमाउन नागरिकहरू वाध्य छन् । राजनीति र सत्ता दाउपेचमा छ । मुनाफाका प्रतिशत र लेनदेनमा अड्किएका छन् भ्याक्सिनहरू । बाँच्नचन्दा मर्न झन् गाह्रो बनिरहेछ, जब शवको अन्तिम संस्कारसम्म सहज बनिरहेको छैन । स्रष्टाहरू पनि पीडाबोधमै छन् । स्वस्थ मानिसहरूलाई भय छ, कोरोनाको सङ्क्रमण होला कि भन्ने । तर, कमजोर, अस्वस्थ र पहिलेदेखि नै विभिन्न रोगले ग्रस्त आम मानिसको कथा कस्तो होला नि ! हो, स्रष्टाहरू यसमा झन् चिन्तित छन् । आज आत्मबल उच्च भएकी एक स्रष्टाकै सन्दर्भ उठाऊँ है त ! धरान, पाँचकन्या, गैरीगाउँकी लक्ष्मी राई भिन्न–क्षमताकी महिला हुन्
आज भन्दा ६ वर्ष अगाडी संस्कृत प्रति मेरो मोह खै किन हो ज्यादै थियो बाह्रमण समुदायको छारो भएकोले पनि हो कि समाजको ईच्छा त्यस्तै प्रकारको पो हो कि । २०७५ सालको वार्षिक परीक्षा सके पछि संस्कृत पढ्न जाने , फेरी विद्यालय परिवर्तन को सोख त्यती बेला धेरै हुने गर्दथ्यो घर बाट एकरात्र कहिले कतै गएर नसुतेको म घर बाट हिड्दा त खुब शानमा थिए । ख्याल ख्यालमा जान तयार भए समानको झोला सबै राति नै तयार पारेर सुते भोली बाट धरानको बसाईं कस्तो होला मनमा कल्पना गर्दै धरान बजार कल्पना गर्दै सुते, मेरो मनमा अलिकति पनि घर बाट टाढा जादैछु भन्ने सोच आएको थिएन । भोलि पल्ट बिहानै उठे तयारी भए मनमा राति देखिका धरान बसार्ई
विषय र सीमासाहित्यकार झमक घिमिरेका विधाका कृतिहरूको मात्र परिचय, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन भइरहेको सन्दर्भमा स्तम्भकारका रूपमा उनले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा ‘आफ्नै परिवेश’ स्तम्भमार्फत् व्यक्त गरेका बहुविषयसम्बद्ध धारणाहरूको अध्ययन अवलोकन तथा मूल्याङ्कन प्रस्तुत विषयको प्रयोजन बनेको छ । स्तम्भकार झमकका ‘कान्तिपुर’मा प्रकाशित ‘आफ्नै परिवेश’ स्तम्भका सामाग्रीहरूलाई मात्र प्रस्तुत अध्ययनको विषयक्षेत्र बनाइएको छ । स्तम्भप्रकाशनको निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०६५ सालभरिमा प्रकाशित आफ्नै परिवेशका सामग्रीहरूलाई मात्र अध्ययनका निम्ति छनौट गरिएको छ । व्यक्तित्
1,522 पटक पढिएको
गजल किन हिरो भइरहेछ ? आजभोलि नेपाली साहित्यको हिरो विधा नै गजल भएको छ । सबैजसो किशोर र युवावर्ग गजलमा नै आकर्षित भएका पाइन्छन् । गजल काव्यिक विधा नै हो । अतः काव्यका कविता, गीत, मुक्तक, हाइकुसँग यसको विधागत साइनो अवश्य छ तर यी कुनै पनि विधा बिगारेर, तन्काएर, छोट्याएर केरमेट गरेर वा जबर्जस्त ढङ्गले गजल बनाउन सकिन्न । यसर्थ गजल अरू प्रचलित विधाहरूबाट भिन्न विशिष्ट विधा हो । संक्षेपमा हेरौं कसरी भिन्न छ, कसरी विशिष्ट छ त गजल , भावमय हुन्छ, तर कविता होइन गजल कविता र गजल दुबै काव्यविधाका सशक्त सन्तान हुन् । यी दुबैका बीच भावमयताको काव्यिक साइनो छ । गजल र कविता दुबै कलापूर्ण सिर्जना हुन् । अभिव्यक्